« Raharaha kidnapping » : mbola tsy hita i Stéphanie, karohina fatratra i Vita Rosine «mpimasy» | NewsMada
« Raharaha kidnapping » : mbola tsy hita i Stéphanie, karohina fatratra i Vita Rosine «mpimasy»
« Fakana olona an-keriny, fihazonana olona, fanaovana fikambanan-jiolahy, ary firaisana tsikombakomba ». Ireo no anton’ny filazana fikarohana (avis de recherche) an’i Roger Lala Stephanie, ilay vehivavy malaza anisan’ny tafiditra sy voarohirohy ao anatin’ireny « Raharaha kidnapping » tany Toamasina ireny.
Roger Lala Stéphanie ny anarany. Teraka tamin’ny 14 aogositra 1975 tao Toamasina, tompon’ny kara-panondrom-pirenena lah. 301 012 004 779, monina ao Mangarivotra Toamasina. Araka ny voalaza etsy ambony, « fakana olona an-keriny, fihazonana olona, fanaovana fikambanan-jiolahy, ary firaisana tsikombakomba » tamin’ireny « Raharaha kidnapping » nalaza tany Toamasina ireny, no nahavoarohirohy sy hanenjehana azy io. Tapa-bolana latsaka kely, aty aorian’ny filazana fikarohana (avis de recherche), tamin’ny 22 janoary 2016, navoaka sy naparitaky ny lehiben’ny sampandraharaha momba ny raharaha heloka bevava (brigade criminelle), ny kaomisera Rakotondrasoa Jean de Matha, mbola tsy hita popoka izay misy an’ity Roger Lala Stéphanie ity. Hiantsoan’ny BC fiaraha-mientana amin’ny olon-drehetra izany, indrindra ireo tsara sitrapo mahita na mahalala vaovao momba azy io, ka hampandre azy ireo na hiantso ny laharan-telefaonina 034 05 517 26.
Niainga avy tamin’ny fanadihadiana sy famotorana ireo olona efa voasambotra tamin’ity « Raharaha kidnapping » tany Toamasina ity no nivoahan’ny anaran-dramatoa ity. Saiky voatonontonona hatrany izy tamin’izany, ary voalaza fa tsy vao sambany fa efa tafiditra tamin’ny raharaha fakana an-keriny hafa koa, talohan’ireny nakana an-keriny an-dry Arnaud sy Annie ireny. Voalaza mihitsy koa aza fa olona tokony mbola hamita sazy any am-ponja izy io nefa tafavoaka indray ka io mbola nanohy ny asa ratsiny io. Izay ilay antsoin’ny polisy amin’ny hoe « mpamerin-keloka » (récidiviste).
Vita Rosine « mpimasy »
Tsy izy ihany anefa. Fantatra koa izao ny fisian’izany vehivavy iray hafa, antsoina hoe Vita Rosine izany, izay mbola tafiditra ihany koa ao anatin’ity « Raharaha kidnapping » tany Toamasina ity. « Rosine mpimasy na Kalanoro » ny anaram-bositra ahafantaran’ny maro azy any Toamasina. Araka izany anarany izany, mety ho mpilalao fanafody na ody gasy ramatoa ity. Toa iry voalohany ihany, araka ny vaovao azo tamin’ny polisin’ny brigade criminelle (BC), olona efa mpamerin-keloka, ary efa naiditra am-ponja, teny Antanimora, ny 20 oktobra 2014, izy io, saingy tafatsoaka nandositra tamin’ny 27 jolay 2015 lasa teo. Izy, hoy ny voalazan’ny polisy, no mpanome toromarika ireo jiolahy tena manao ny fakana an-keriny, toy izay niseho tany Toamasina, ny taona 2014, izay nahasamborana sy nampidirana olona enina am-ponja. Efa namoahan’ny polisy filazana fikarohana ihany koa ity Rosine mpimasy ity, araka ny voalaza. Fantatra fa niara-nandositra sy miriaria any izy roa vavy ireto amin’izao fotoana izao.